MOETHIHAAUNG: Sciatica (စိုင်ယာတစ်ကာ) အောက်ပိုင်းနာခြင်း
ကျွန်မအသက် ၄၀ နှစ် ရှိပါပြီ။ ကျွန်မမှာ တင်ပါးခွက်ကြော ညပ်သလိုဖြစ်နေတာ ၃ လ လောက်ရှိပါပြီ။ အလုပ်ကတော့ အထိုင်များတဲ့အလုပ်ပါ။ ဆရာဝန်နဲ့လည်း ပြပါတယ်။ ဓါတ်မှန်လည်းရိုက် ကြည့်ပါတယ်။ အကြောက ညပ်တာလဲ မတွေ့ရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ခြေသလုံးလဲကိုက်ပါတယ်။ ခြေချောင်းလေးတွေကလဲ ခဏလေးထိုင်တာနဲ့ ကျင်လာပါတယ်။ ဆေးလဲသောက်ပါတယ်။ လိမ်းဆေးတွေလဲ လိမ်းပါတယ်။ ခြေတောက်က ပက်လက်အနေအထားနဲ့ဆို 90ံမတ်လို့ မရပါဘူးဆရာ။ အဲဒီလို ခြေတောက်ကိုမလိုက်ရင် တင်ပါးခွက်ထဲက တအားနာလာပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဆရာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ဆေးကူသမှုခံ ယူသင့်ပါလဲရှင်။ လေဖြတ်မည်ကို အလွန်စိုးရိမ်မိပါတယ် ဆရာ။
တကယ်တော့ ဒီရောဂါဖြစ်ရင် ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာနာယုံသာမက၊ အားနည်းနေမယ်၊ ထုံနေမယ်၊ ကျင်နေပါအုံးမယ်။ Sciatica nerve အပေါ်မှာ ဖိအားသက်ရောက်နေတာနဲ့ သူ့ကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ ဖြစ်လာတာပါ။ ရောဂါပင်ရင်းမဟုတ်ပဲ ရောဂါ လက္ခဏာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအာရုံကြောကနေ ခြေထောက်နောက်ဖက် (ပေါင်၊ ခြေသလုံး၊ ခြေထောက်) ကို သက်ရောက်တယ်။
1. Slipped disk ခါးဆစ်ကျွံခြင်း၊
2. Spinal stenosis ခါးဆစ်ကျဉ်းခြင်း၊
3. Piriformis syndrome တင်ပါးနေရာကြွက်သားသေးများထိခိုက်ခြင်း၊
4. Pelvic injury or fracture တင်ပါးဆုံအရိုးကွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း
5. Tumors ကင်ဆာ-အကျိတ်
• နာပုံနာနည်းက အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျသလို၊ ထုံပြင်ပြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း။ သူနေအောင်နာခြင်း။ တခါတလေ လှုပ်ရှားလို့ မရအောင်အထိ နာတယ်။ တဖက်ဖက်မှာ သိသာတယ်။
• တခါတလေ နည်းနည်းခြင်းကနေ ဆိုးဆိုးလာတယ်။ ဥပမာ မတ်တတ်ရပ်ရင်၊ ညအချိန်၊ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုး၊ ရယ်မော၊ လမ်းရှည်လျှောက်ခြင်း၊ နောက်လှန်ခြင်း။
• တချို့မှာ နားတာနဲ့ ဆေးမပါဘဲ သက်သာတယ်။ အိပ်ယာထဲနားဘို့အထိ မလိုပါ။ အလုပ်လျှော့လုပ်ပါ။ အလုပ်လုပ်ရင် ဖြေးဖြေးချင်းကနေစပြီး တိုးလုပ်ပါ။ အလေးအပင်မတာ သတိထားပါ။ အပူကပ်တာနဲ့ အအေးကပ်တာ သက်သာမယ်။ Ibuprofen နဲ့ Acetaminophen (Paracetamol) ဆေးသောက်နိုင်တယ်။
• လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ဗိုက်ကိုဆန့်တန်းနည်းလုပ်ပါ။
• လိုအပ်သူတွေကဆရာဝန်က ဆေးအပြင်းသုံးမယ်။
Posted by Myo Lwin Aung at 1:34 PM